Fahasamihafana eo amin'ny Alumina mihetsika sy ny sivana Molecular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Alumina mihetsika sy ny sivana Molecular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia indostrialy / Fahasamihafana eo amin'ny Alumina mihetsika sy ny sivana Molecular
Fahasamihafana eo amin'ny Alumina mihetsika sy ny sivana Molecular
23 martsa 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alumina mihetsika sy ny sivana molekiola dia ny alimina navitrika dia manana pores maro be, fa ny sivana molekiolika kosa dia manana pores kely ambany .
Ny alumina mihetsika sy sivana molekiola dia fitaovana ilaina amin'ny fitrohana rano ho toy ny mpihinam-bary. Ireo fitaovana ireo dia manana fahaiza-manao adsorption matanjaka ho an'ny etona rano.
2. Inona no atao hoe Alumina
3. Inona no atao hoe Sivana Molekular
4. Fampitahana mifanila - Alumina mihetsika vs Molecular Sieve amin'ny endrika Tabular
Inona ny atao hoe Alumina?
Alumina navitrika dia fitaovana goavambe tena vita amin'ny oksida aluminium . Ity fitaovana ity dia amboarina amin'ny alàlan'ny dihydroxylation an'ny hydroxide aluminium. Ny velarantanin'ity fitaovana ity dia avo dia avo, 200 metatra toradroa isaky ny grama. Ny alumina mihetsika dia zava-dehibe amin'ny maha- desiccant azy izay afaka mitazona ny akony ho maina amin'ny alàlan'ny fisotroana rano avy amin'ny rivotra manodidina. Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia azo ampiasaina ho sivana fluorida, arsenika ary selenium amin'ny rano fisotro.
Ny alumina navitrika dia manana tahan'ny velarana manodidina ny lanjany lehibe. Izany dia satria ity fitaovana ity dia manana pores "toy ny tunnel" maro.
Sary 01: fisehoan'ny Alumina navitrika
Betsaka ny fampiharana ny alumina mihetsika, ao anatin'izany ny fampiharana catalyst, ampiasaina ho toy ny desiccant, ho toy ny fluoride adsorbent, amin'ny rafitra banga, toy ny biomaterial, ary ny fanadiovana. Amin'ny fampiharana catalyst, ny alumina mihetsika dia ilaina amin'ny maha-catalyst amin'ny famokarana polyethylene, famokarana hydrogen peroxide, sns. Avy eo, lasa voafandrika ireo molekiola ao anaty rano. Ho fanampin'izany, ity fitaovana ity dia ilaina amin'ny famoahana fluoride amin'ny rano fisotro.
Inona no atao hoe sivana Molecular?
Ny sivana Molecular dia fitaovana misy poria manana pores manana habe mitovy amin'ny azy. Ny savaivon'ireo mason-koditra ireo dia mitovy amin'ny haben'ny molekiola kely dia kely. Noho izany dia tsy afaka mamakivaky ireo pore ireo ny molekiola lehibe, ary voadidy izy ireo, saingy molekiola kely kokoa no afaka mamakivaky ireo pore ireo. Azontsika atao ny mandrefy ny savaivon'ny sivana molekiola amin'ny alàlan'ny singa Angstrom na nanometa.
Sary 02: fisehoan'ny sivana an-tsokosoko
Rehefa mifangaro môlekiola mifindra monina amin'ny alàlan'ny fandriana tsy misy poria sy semi-solid (ny sieve), ireo singa manana lanjan'ny molekiola avo dia mazàna mandao ny farafara aloha; avy eo tonga ireo molekiola kely kokoa nifandimby. Noho izany, ireto sivana molekiola ireto dia ilaina amin'ny chromatography. Ny karazana sivana sivika dia ilaina toy ny desiccants.
Momba ny fampiharana ny fitaovana sieve molekiola dia azontsika ampiasaina amin'ny indostrian'ny solika ho an'ny fanamainana renirano. Azontsika atao ny mampiasa an'io fanafody io amin'ny solvents maina izay misy desiccants mahery setra. Ankoatr'izay, misy ny fampiharana catalytic izay afaka manimba ny isomerisation, ny alkylation ary ny epoxidation. Ho fanampin'izany, afaka mampiasa sivana molekiola isika amin'ny filtration ny famatsian-drivotra amin'ny fitaovam-pisefoana toy ny scuba divers sy ny mpamono afo.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Alumina Activated sy ny Molecular Sieve?
Ny alimina alimina sy sivana molekiola dia fitaovana goavambe. Ny alumina navitrika dia fitaovana goavambe tena vita amin'ny oksida aluminium ary sieve molekiola kosa dia fitaovana misy pore manana habe mitovy amin'ny azy. Noho izany, ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alumina mihetsika sy ny sivana molekiola dia ny alimina navitrika dia manana pore maro dia maro, fa ny sivana molekiola kosa dia bitika kely ny mason-koditra.
Ity ambany ity dia famintinana ny fahasamihafana misy eo amin'ny alumina mihetsika sy sivana môlekiola amin'ny endrika tabilaoro.
Famintinana - Alumina mihetsika vs Sivana Molekular
Ny alumina mihetsika sy sivana molekiola dia fitaovana ilaina amin'ny fitrohana rano ho toy ny mpihinam-bary. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alumina mihetsika sy ny sivana molekiola dia ny alimina navitrika dia manana pores maro be, fa ny sivana molekiolika kosa dia manana pores kely ambany.
1. “Sivanina Molecular.” Encyclopædia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc., Hita eto .
1. “Active Al2O3” Nosoratan'i GOKLuLe 盧 樂 - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. “Molecular Sieve5” Nosoratan'i Psiĥedelisto - Asa manokana (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny menaka mineraly sy synthetic Fahasamihafana eo amin'ny UPVC sy CPVC Fahasamihafana eo amin'ny Zintec sy Galvanized Fahasamihafana eo amin'ny kajy sy ny sivana Fahasamihafana eo amin'ny Pyrrole Furan sy Thiophene
Fahasamihafana eo amin'ny fandaharam-potoana sy ny làlan-kizorana
Fahasamihafana eo amin'ny Crayfish lahy sy vavy
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy Ace sy Apple iPhone 4
Fahasamihafana eo amin'ny JPEG sy JPG
Fahasamihafana eo amin'ny fandaniana amin'ny fandrefesana sy ny fandaniana miovaova